लिन डानको संन्यासपछि...- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
सांघाई — दुईपल्टका ओलम्पिक च्याम्पियन ब्याडमिन्टन खेलाडी लिन डानले अन्ततः संन्यास लिएका छन् । उनी हुन् चीनले पाएका थोरै ठूला खेलाडी स्टारमध्ये एक ।
चिनियाँ मिडियाले डानको संन्यासलाई ठूलो महत्त्व दिन खोजेको छ । आखिरमा उनी पूरा विश्व ब्याडमिन्टनकै सबैभन्दा ठूला स्टार हुन् । यी ३६ वर्षीय डानले शनिबारमात्रै घोषणा गरेका थिए, आफ्नो संन्यासबारे । उनले आफ्नो खेलजीवनमा पाँचपल्ट विश्व उपाधि पनि जिते ।
एनबीए स्टार याओ मिङ, ओलम्पिक स्वर्ण विजेता हर्डल्स धावक लिउ सियाङ र दुईपल्टका ग्रान्ड स्लाम विजेता टेनिस खेलाडी ली ना सबैले गत दशकमै संन्यास लिइसकेका थिए । अब पालो डानको । त्यसलै सिन्ह्वाले लेखेको छ, ‘सुपर डानले पनि संन्यास लिएपछि अब चिनियाँ खेलकुद शून्य–शून्य जस्तै भएको छ । चिनियाँ खेलकुदसँग सम्बन्धित ठूला स्टारको युग अब एक प्रकारले सकिएको छ ।’ डानको संन्यासपछि धेरै प्रश्न उठेका छन् ।
अब अर्को लिन डान को त ? अर्का याओ मिङ, लिउ सियाङ र ली ना अहिले आउने हो त ? अझ अर्को पुस्ताको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नाम चलेका खेलाडीको जन्म कहिले हुने हो त ? सिन्ह्वाको विश्लेषण हो, चिनियाँ खेलाडीले खाली खेल्ने मात्र होइन, देश आफैंको पनि अन्तर्राष्ट्रिय छवि तयार पार्ने गर्छन् । प्रभाव उत्तिकै छाड्ने गर्छन् । चीन वास्तवमै के हो त, कस्तो छ त ? यो बुझ्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम पनि खेल र खेलाडी नै हो ।
चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका अनुसार भलिबल खेलाडी झु टिङसँग ठूलो खेलाडी बन्ने क्षमता छ । प्रतिबन्धित शक्तिबर्द्धक औषधिको प्रकरणमा जोडिने गरे तापनि पौडीवाज सुन याङ लोकप्रिय छन् । तर उनी प्रतिबन्धबाट गुज्रिरहेका छन्, त्यो आठ वर्षको । त्यसो त उनले यसविरुद्ध अपिल त गरेका छन् तर यो प्रतिबन्ध कायम रहे, २८ वर्षीय याङको खेलजीवन सकिने निश्चित छ । त्यसो त ओलम्पिकमा चीनले प्रस्तुत गर्ने चुनौती कम्तीको हुन्न ।
सन् २०१६ को रियो ओलम्पिकमा पनि चीन पदक तालिकामा तेस्रो स्थानमा थियो, अमेरिका र रुसपछि । तर यी पदकधारी खेलाडी बाँकी विश्वमा त के चीनमै पनि खासै चिनिने अनुहार होइनन् । सम्भवतः डानबराबरकै खेलाडी हुन्, टेबलटेनिसका झाङ जिके । उनले पनि तीनपल्ट ओलम्पिकमा स्वर्ण जितेका छन् । तर उनी आफैं संन्यास लिने समयमा पुगिसके । यस्तोमा चिनियाँ सञ्चारमाध्यमको प्रश्न हो, अर्को डान जत्तिको खेलाडी कहिले आउनेछ त ? सिन्ह्वालाई डर छ, यसको उत्तर पनि चाँडै पाइनेछैन ।
प्रकाशित : असार २६, २०७७ १२:०९
असार २६, २०७७ सुवास विडारी
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरमा गठन गरेको खेलकुद विकास समिति भूमिकाविहीन बनेको छ । आवश्यक ऐन कानुन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण नगरी हतारोमा राजनीतिक नियुक्त गर्दा समितिहरू कामविहीन भएका हुन् ।
वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत १३ जिल्लाका लागि माघ २१ गते अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय समिति प्रदेश सरकारले गठन गरेको थियो । तर समितिको प्रशासनिक र खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि अझैसम्म आवश्यक बजेट तथा कर्मचारी प्रदेशले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
हतारोमा समिति गठन गर्दा जिल्ला तहमा कार्यालयसमेत खोल्न आफूहरूलाई गाह्रो भएको गुनासो अध्यक्षहरूले गरिरहेका छन् । ‘हामीले चैत १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थियौं । तर अहिलेसम्म आवश्यक बजेट र कर्मचारी पाएका छैनौं । सुरुमा कार्यालय खोल्नसमेत सकेका थिएनौं । अहिले साविकको खेलकुद विकास समितिको भवनमा समन्वय गरेर बसिरहेका छौं ।’ जिल्ला खेलकुद विकास समिति मकवानपुरका अध्यक्ष सानु लामाले आवश्यक बजेट र कर्मचारी नहुँदा आफूहरू कामविहीन भएर बस्नुपरेको गुनासो गरे । खेलकुद विकास समिति धादिङका अध्यक्ष प्रताप लामाले खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने नजर पुरानै शैली भइरहेको भन्दै गुनासो गरे । ‘न आर्थिक अधिकार प्राप्त भएको छ । न त काम गर्नका लागि आवश्यक खेल सामग्री, कार्यविधि र कर्मचारी नै । नियुक्त भएको यतिका लामो समय हुँदासम्म प्रदेश तहबाट आवश्यक समन्वय भएको छैन । हामीले हाम्रो कुरा मन्त्री तथा सदस्य सचिवसमक्ष राखिरहेका छौं ।’
उनले अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि व्यक्तिगत पहलमा खेल क्षेत्रमा केही कामहरू गरेको भए पनि संस्थागत कुनै किसिमको काम गर्न नपाएको सुनाए । ‘हाम्रो सेवासुविधाको विषयसमेत अझै अन्योल नै रहेको छ,’ उनले थपे । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले आफूलाई पूर्णरूपमा वेबास्ता गर्दा जिल्ला तहमा खेलकुद गतिविधि ठप्प भइरहेको गुनासो खेलकुद विकास समिति काभ्रेका अध्यक्ष मानवीर लामाको छ । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बजेट प्राप्त हुने आश्वासन आएको छ । कर्मचारी प्रदेश तहमा समायोजन भएर आएपछि आउने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यालय जानसमेत असहज भइरहको छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले खेलकुद ऐन निर्माण गरी गत वर्ष असार २४ गते प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन गरेको थियो । परिषद्को गठनसँगै संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सिको गर्दै जिल्ला तहमा समिति गठन भएका हुन् ।
परिषद्का सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले प्रदेश तहमा निर्माण भएको खेलकुद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएका कारण आर्थिक अधिकार जिल्ला तहलाई दिन नसकिएको बताए । ‘हामीले बनाएको ऐनमा खाता सञ्चालनसम्बन्धी बुँदा स्पष्ट नहुँदा समस्या भइरहेको छ । सदनबाट ऐन संशोधनपछि जिल्ला तहलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट पठाउनेछौं ।’ सदस्य सचिव भण्डारीले संघीय सदनबाट खेलकुद ऐन पारित भइसकेको अवस्थामा अब खेलकुदअन्तर्गतका कर्मचारी प्रदेश तहमा समायोजन भएर आउने बताए । ‘संघीय सरकारअन्तर्गतका खेलकुदका कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएर आएपछि हामी जिल्लाजिल्लामा कार्यालय प्रमुखका रूपमा खटाउनेछौं,’ उनले थपे ।
भण्डारीका अनुसार संघीय सदनबाट खेलकुद ऐन पारित गर्न ढिलाइ हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको हो । ‘हामीले खेलकुद ऐन छिट्टै बन्छ । कर्मचारी आउँछन् । हाम्रा अध्यक्षहरूले काम गर्न सुरु गर्नेछन् भनेर अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यौं तर हतारो गरिएछ ।’ सदस्य सचिव भण्डारीका अनुसार आवमा १३ जिल्लाको कार्यालय सञ्चालन गर्न करिब ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘आगामी वर्षबाट जिल्ला तहका खेलकुद संरचना त्यहींबाट सञ्चालन हुनेछ । जसले गर्दा ससर्ततर्फ बजेट पनि जिल्लालाई नै पठाइनेछ,’ उनले थपे, ‘कोरोनाका कारण पनि हाम्रो काम प्रभावित भएका थिए । अब ऐन संशोधन र पूर्वाधार निर्माणको काम एकैपटक अगाडि बढ्नेछ ।’ भण्डारीले खेल तालिका प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको र लकडाउनपश्चात् धमाधम सुरु गरिने दाबी गरे ।
प्रकाशित : असार २६, २०७७ १२:०७